Kadib 16 Saxiix Oo Ay Sameeyeen Real Madrid, Barcelona & Atletico Madrid-Ma Shaxahan Ayay Zidane,Valverde & Simeone Ku Bilaaban Doonaan Horyaalka La Liga? - Gool24.Net
Xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 ee horyaalka La liga ayaa soo dhawaanaya waxayna saddexda kooxood ee Spain ugu saamaynta badani soo qaateen xili suuquu ugu mashquulka badnaa iyada oo Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona ay la soo saxiixdeen isku darka 16 ciyaartoy oo cusub.
Barcelona ayaa ah kooxda ugu saxiixyada yar marka la barbar dhigo kooxaha ay la xifiltamayso ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Barca ayaa 3 saxiix samaysay ilaa hadda halka Atletico Madrid ay 8 saxiix si layaableh u samaysay waxayna Real Madrid ilaa hadda samaysay 5 saxiix.
Iyada oo muddo bil ka yar la sugi doono bilaabashada horyaalka La Liga ee xili ciyaareed cusub waxaa haddaba la sii qiyaasi karaa qaabka ay shaxaha kooxaha waa wayn ee Spain noqon karaan kuwaas oo ay Zidane, Valverde iyo Simeone ku xifiltami karaan xili ciyaareedka cusub.
Wali hawlgalka kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo Atletico Madrid ee suuqa kala iibsigu muu dhamaan iyada oo Barcelona si wayn u doonaysa saxiixa Neymar Jr halka Real Madrid ay dagaal ugu jirto Pual Pogba waxaana Atletico Madrid u calaamadsan James Rodriguez ama Christian Eriksen.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa sida ay shaxaha kooxaha waa wayn ee La Liga noqon karaan haddii ayna wax saxiixyo cusub ah samayn oo ay ku hawl galaan ciyaartoyda ay maanta haystaan.
Waxaa naga xusuusin ah in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ay boosaska shaxahooda qaar ka mid ah ku haysan karaan laba ciyaartoy ama ka badan kuwaas oo xogta shaxaha macquulka ah ka soo muuqan doona iyaga oo isku boos ah.
Shaxda Macquulka Ah Ee Diego Simeone Ku Ciyaari Lahaa Haddii uu Maanta Horyaalka La Liga Furmo:
Tababare Diego Simeone waxa uu xagaagan sameeyay 8 saxiix oo cusub iyada oo ay ciyaartoy badani ka baxday kooxdiisa wuxuuna doonayaa in uu xili ciyaareedka cusub si xoogan ula tartamo kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Shan boos oo ka mid ah shaxda macquulka ah ee uu Simeone ku ciyaari karo xili ciyaareedka cusub waxa uu ku heli doonaa min laba ciyaartoy halka boosaska kale yihiin kuwo ay ciyaartoy muhiim ahi buuxin doonaan.
Halkan kaga bogo qaabka uu Simeone ku shaqayn karo xili ciyaareedka cusub xataa haddii aan hal saxiix oo kale samayn.
Riix 2,3 si aad shaxaha ugu macquulsan ee Zidane iyo Valverde ku shaqayn karaan uga bogato.